Arts & Humanities » စတိဗ်ဂျော့ဘ် မုန်းခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်အကြောင်း	36
View all posts by ဇေယျာစံ →	Blog
ခင်ဇော် says: ဖတ်လို့ကောင်းးတာ…
ဇေယျာစံ says: Thanks
Mr. MarGa says: ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ဖူးတယ်
ဇေယျာစံ says: Ref; http://www.theverge.com/2013/12/4/5173524/android-founder-andy-rubins-secret-google-project-building-real-robots
Alinn Z says: အရေးအသားက ကျစ်လျစ်ပြီး သပ်ရပ်နေတာပဲဗျ
ဇေယျာစံ says: Techspace ဂျာနယ် မှာ အဖုံးဆောင်းပါး ပါခဲ့ပါတယ်။
Mr. MarGa says: ဒါကြောင့်ကိုး
ဆက်တင်ပေးပါဗျို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 66
ဇေယျာစံ says: ရှေ့က ၄ ခု က ၂ ခု ပဲ ပြန်ရှာတွေ့တော့တယ် ဗျာ …
kai says: အဲလို ရှာဖွေပေါင်းစပ်ပြန်ရေးတာမျိုးဆို.. ပုံနှိပ်သတင်းစာမှာသုံးဖို့မျက်စောင်းထိုးနေ..။
ဆက်တင်ပါဗျို့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ချစ်သော စတိဗ်
Xerox အတွက် ပေးဆပ်လိုက်တယ်လို့ သာ မှတ်လိုက်ပါတော့။ မှတ်ချက် –
ဇေယျာစံ says: thzalot.
ကြောင်ဝတုတ် says: ဒီနေရာမှာ… အရီးနဲ့ ကျွန်တော် သဘောထားနဲနဲလွဲပြီဗျ…
Mike says: .ဗဟုသုတရလို့ စာရေးသူကိုကျေးဇူးပါဗျ
ဇေယျာစံ says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: .ဒီစာလေးကောင်းလိုက်တာ..ရွာသားသစ်ထင်တယ်လို့တွေးပြီး ရေးခဲ့တဲ့ ပို့စ်တွေ လိုက်ကြည့်မှ ပေါ်တော်မူပဲ။
ဇေယျာစံ says: ၃ က..
Courage says: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
manawphyulay says: Long time no see ဘာတွေ ဘယ်မှာလုပ်နေလဲ။ အားလုံးအိုကေလား… အရင်ဖုန်းပဲ ကိုင်တာလား။
ဇေယျာစံ says: မမြင်ရတာ အရှည်ကြီး ..။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ကိုယ်က အဲဒီနယ်ပယ်နဲ့ လားလားမျှ မသက်ဆိုင်သူဆိုတော့ စတိဗ်ဂျော့ တို့ ဘီလ်ဂိတ် တို့လောက်သာ ကြားဖူးတာ… ခုလိုလေး ဖတ်ရတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်…
Ma Ma says: သုတစာပေကောင်းတစ်ပုဒ်ဖတ်လိုက်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: စတိဂျော့ကိုမုန်းဒယ်။ အန်းထရွိုက်ပဲ ကြိုက်တယ်။
Wow says: ပို့စ် ထက် အာ့ဂ ဂယ်ဂျီးလားလို့ ….
မြစပဲရိုး says: စူပါမန်း ကို မြင်ကြည့်လေ ဒေါ်ဝါးလေး။ lol:-))) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: Batman နဲ့ Spiderman လဲ ဒီလိုဘဲ။ :-)))))))))
Wow says: ဟုတ်သား.. ဟီးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 66
ဇေယျာစံ says: Was this answer helpful?LikeDislike 8014
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: အဲ့ဘီးကျဲ
ဇေယျာစံ says: မဆဲလောက်ဘူး ထင်တယ် ဗျ။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: မိ က အိုင်​အိုအက်​စ်​သာမကဘူး ၀က်​ဆိုက်​ပါ ​ကော်​ပီကတ်​တာခည
uncle gyi says: Android OS ကအသုံးလွယ်သပေါ့
ဇေယျာစံ says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6551
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ခင်ဗျား ဘာသာပြန် ထားတာ တယ်မိုက်သဗျာ …။
ဇေယျာစံ says: ကျေးဇူးပါဗျာ ..။
ဦးကြောင်ကြီး says: .. ဇေယျစံ ငွေသာမှန် စေကာပြန် မြွေပါကြံ
ဇေယျာစံ says: အိ ..